လျှောက်လမ်းပေါ်မှ ထူးထူးဆန်းဆန်းဖက်ရှင်များ – For her myanmar
Posted on January 15, 2019 January 15, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
ဟင်.. မျက်လုံးတွေ ပြူးရပြီလေ 😱😱
နိုင်ငံခြားမော်ဒယ်လ်ရှိုးပွဲတွေမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေ ဝတ်ဆင်ပြသတာကို ယောင်းတို့ မြင်ဖူးကြမှာပါနော်။ အဲဒီလို လျှောက်လမ်းပေါ်က ဖက်ရှင်တွေထဲကမှ အဆန်းတကာ့ အဆန်းဆုံးဆိုတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို ယောင်းတို့အတွက် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်တယ်။
ကင်းဗတ်စ နဲ့ ပန်းချီးကားဘောင် တို့ကို အခြေခံဖန်တီးထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေကို ဒီဇိုင်နာ VIKTOR & ROLF တို့က သူတို့ရဲ့ ဆောင်းဦးဖက်ရှင်ရှိုး 2015 HAUTE COUTURE Collections မှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Gareth Pugh က 2012 နွေဦးဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှာ ဖန်တီးပြသခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံပါ။ နွေရာသီဆိုတော့ ပြတင်းပေါက်နဲ့တူအောင်များ ဖန်တီးထားတာများလား 😀
ဒီဇိုင်နာ Viktor and Rolf တို့ရဲ့ 2007/2008 ဆောင်းဦး နဲ့ ဆောင်းရာသီဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှာ ပြသခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တဲ့။ ဓာတ်ပုံပညာကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ဖက်ရှင်လို့တော့ ခံစားမိတာပဲ ယောင်းတို့ရော ဘယ်လိုမြင်လဲ?
ဟာ သွားရည်ကျ 😛
ဒီဝတ်စုံကိုတော့ ဒီဇိုင်နာ Ágatha Ruíz က မီလန် ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှာ ဖန်တီးပြသခဲ့တာပါ။ အက်ဒ်မင်တော့ ဒီဖက်ရှင်ကိုကြည့်ပြီး ပေါင်မုန့် နဲ့ ကြက်ဥကြော်စားချင်သွားတယ် ခိခိ။
Central Saint Martins Ba ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှာ နွေဦး နဲ့ နွေရာသီဝတ်စုံတွေ ဖန်တီးပြသခဲ့တာတဲ့။ မော်ဒယ်တော့မသိဘူး.. အက်ဒ်မင်ဆိုရင်တော့ မျက်လုံးအတွက် ဖောက်ထားပေးတဲ့ အပေါက်နှစ်ပေါက်ကနေ မနည်းပြူးပြဲ ကြည့်ရမယ် :3
ဒါကလည်း 2015 Central Saint Martins ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမှာ ဆောင်းရာသီဖက်ရှင်တွေကို ပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။ အဲ့ မော်ဒယ်လ် လမ်းလျှောက်ရ မခက်ဘူးလား မသိ 😀
ငယ်ငယ်က ဆော့ခဲ့တဲ့ အရုပ်မတောင် ပြန်သတိရသွားသေး
2015 Central Saint Martins ရဲ့ ဆောင်းရာသီဖက်ရှင်ရှိုးမှာ ဝတ်ဆင်ပြသခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံပါ။ လန်းတော့ လန်းတယ် ဘာတွေမှန်းမသိဘူးနော်။
Related Article >>> ၁၉၇၀-၉၀ ပြည့်နှစ်များဆီမှ မြန်မာ့ဖက်ရှင်များ
2015 Central Saint Martins ရှိုးပွဲမှာ ပြသခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီဝတ်စုံပါ။ လန်းချက်ကတော့ လက်ဖျားခါလောက်တယ်နော်။
2017 Thom Browne ဖက်ရှင်ရှိုးရဲ့ ဆောင်းရာသီဝတ်စုံပါတဲ့။ အက်ဒ်မင်တော့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး လေးနေရော 🙁
ဒီဝတ်စုံကတော့ လန်ဒန်ဖက်ရှင်ကျောင်းက ကျောင်းဆင်းအခမ်းအနားမှာ ဖန်တီးပြသခဲ့တဲ့ဝတ်စုံပါတဲ့။ တော်တော်လန်းတဲ့ ဒီဇိုင်းပဲနော်။
ဒီမထော်မနန်းတွေကို အပြင်မှာ ဘယ်သူက ဝတ်မှာလဲတော့ မမေးပါနဲ့နော်… လျှောက်လမ်းပေါ်က ဖက်ရှင်ဆိုတာက ဒီဇိုင်နာတွေ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီး သူတို့ရဲ့ အနုပညာကို ပြသတဲ့ ပွဲပါ… အပေါ်က ဒီဇိုင်းတွေကိုဆို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သြော်.. ဒီ ဒီဇိုင်နာကတော့ သူ့ဝတ်စုံကို ဘယ်က Inspire (လွှမ်းမိုးမှု) ယူထားတယ်၊ သူကတော့ အတော်လေး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းတယ်ဆိုပြီး ခံစားသွားရတာမျိုးပေါ့…
ကဲ.. ဒါဆို ဒီဝတ်စုံတွေထဲက ဘယ်တစ်ခုကို အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါဦးယောင်းရေ။ အရမ်းကြိုက်လို့ ချုပ်ဝတ်မယ်ဆိုလည်း ဓာတ်ပုံလေးပါပြနော်။ 😛
References: vogue, operachic, wwd, fuckingyoung, famodesacs, designdautore, sothebys, fashion.telegraph
ဟငျ.. မကျြလုံးတှေ ပွူးရပွီလေ
နိုငျငံခွားမျောဒယျလျရှိုးပှဲတှမှော ထူးထူးဆနျးဆနျးဝတျစုံဒီဇိုငျးတှေ ဝတျဆငျပွသတာကို ယောငျးတို့ မွငျဖူးကွမှာပါနျော။ အဲဒီလို လြှောကျလမျးပျေါက ဖကျရှငျတှထေဲကမှ အဆနျးတကာ့ အဆနျးဆုံးဆိုတဲ့ ဖကျရှငျတှကေို ယောငျးတို့အတှကျ စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျတယျနျော။
ကငျးဗတျစ နဲ့ ပနျးခြီးကားဘောငျ တို့ကို အခွခေံဖနျတီးထားတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဝတျစုံဒီဇိုငျးတှကေို ဒီဇိုငျနာ VIKTOR & ROLF တို့က သူတို့ရဲ့ ဆောငျးဦးဖကျရှငျရှိုး 2015 HAUTE COUTURE Collections မှာ ပွသခဲ့ပါတယျ။
ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာ Gareth Pugh က 2012 နှဦေးဖကျရှငျရှိုးပှဲမှာ ဖနျတီးပွသခဲ့တဲ့ ဝတျစုံပါ။ နှရောသီဆိုတော့ ပွတငျးပေါကျနဲ့တူအောငျမြား ဖနျတီးထားတာမြားလား 😀
ဒီဇိုငျနာ Viktor and Rolf တို့ရဲ့ 2007/2008 ဆောငျးဦး နဲ့ ဆောငျးရာသီဖကျရှငျရှိုးပှဲမှာ ပွသခဲ့တဲ့ ဖကျရှငျတဲ့။ ဓာတျပုံပညာကို ကိုယျစားပွုနတေဲ့ ဖကျရှငျလို့တော့ ခံစားမိတာပဲ… ယောငျးတို့ရော ဘယျလိုမွငျလဲ?
ဟာ သှားရညျကြ 😛
ဒီဝတျစုံကိုတော့ ဒီဇိုငျနာ Ágatha Ruíz က မီလနျ ဖကျရှငျရှိုးပှဲမှာ ဖနျတီးပွသခဲ့တာပါ။ အကျဒျမငျတော့ ဒီဖကျရှငျကိုကွညျ့ပွီး ပေါငျမုနျ့ နဲ့ ကွကျဥကွျောစားခငျြသှားတယျ ခိခိ။
Central Saint Martins Ba ဖကျရှငျရှိုးပှဲမှာ နှဦေး နဲ့ နှရောသီဝတျစုံတှေ ဖနျတီးပွသခဲ့တာတဲ့။ မျောဒယျတော့မသိဘူး.. အကျဒျမငျဆိုရငျတော့ မကျြလုံးအတှကျ ဖောကျထားပေးတဲ့ အပေါကျနှဈပေါကျကနေ မနညျးပွူးပွဲ ကွညျ့ရမယျ :3
ဒါကလညျး 2015 Central Saint Martins ဖကျရှငျရှိုးပှဲမှာ ဆောငျးရာသီဖကျရှငျတှကေို ပွသခဲ့တဲ့ ဒီဇိုငျးပါ။ အဲ့ မျောဒယျလျ လမျးလြှောကျရ မခကျဘူးလား မသိ 😀
ငယျငယျက ဆော့ခဲ့တဲ့ အရုပျမတောငျ ပွနျသတိရသှားသေး
2015 Central Saint Martins ရဲ့ ဆောငျးရာသီဖကျရှငျရှိုးမှာ ဝတျဆငျပွသခဲ့တဲ့ ဝတျစုံပါ။ လနျးတော့ လနျးတယျ ဘာတှမှေနျးမသိဘူးနျော။
Related Article >>> ၁၉၇၀-၉၀ ပွညျ့နှဈမြားဆီမှ မွနျမာ့ဖကျရှငျမြား
2015 Central Saint Martins ရှိုးပှဲမှာ ပွသခဲ့တဲ့ ဆောငျးရာသီဝတျစုံပါ။ လနျးခကျြကတော့ လကျဖြားခါလောကျတယျနျော။
2017 Thom Browne ဖကျရှငျရှိုးရဲ့ ဆောငျးရာသီဝတျစုံပါတဲ့။ အကျဒျမငျတော့ သူ့ကိုကွညျ့ပွီး လေးနရေော 🙁
ဒီဝတျစုံကတော့ လနျဒနျဖကျရှငျကြောငျးက ကြောငျးဆငျးအခမျးအနားမှာ ဖနျတီးပွသခဲ့တဲ့ဝတျစုံပါတဲ့။ တျောတျောလနျးတဲ့ ဒီဇိုငျးပဲနျော။
ဒီမထျောမနနျးတှကေို အပွငျမှာ ဘယျသူက ဝတျမှာလဲတော့ မမေးပါနဲ့နျော… လြှောကျလမျးပျေါက ဖကျရှငျဆိုတာက ဒီဇိုငျနာတှေ စိတျကွိုကျဖနျတီးပွီး သူတို့ရဲ့ အနုပညာကို ပွသတဲ့ ပှဲပါ… အပျေါက ဒီဇိုငျးတှကေိုဆို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ သွျော.. ဒီ ဒီဇိုငျနာကတော့ သူ့ဝတျစုံကို ဘယျက Inspire (လှမျးမိုးမှု) ယူထားတယျ၊ သူကတော့ အတျောလေး ဖနျတီးနိုငျစှမျးကောငျးတယျဆိုပွီး ခံစားသှားရတာမြိုးပေါ့…
ကဲ.. ဒါဆို ဒီဝတျစုံတှထေဲက ဘယျတဈခုကို အကွိုကျဆုံးလဲဆိုတာ ပွောပွခဲ့ပါဦးယောငျးရေ။ အရမျးကွိုကျလို့ ခြုပျဝတျမယျဆိုလညျး ဓာတျပုံလေးပါပွနျော။ 😛
Tagged Designer, Fashion, Fashion Show, Model, Runway, weird
Personal grooming ဆိုတာဘာလဲ?
Posted on December 5, 2017 Author Hnin Ei Oo
Posted on October 3, 2017 Author Hnin Ei Oo
အားကစားကလည်း လုပ်ချင်၊ ဖိနပ်တွေကလည်း အဆင်မပြေနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်ဖိနပ်ဝတ်ရမလဲ ခေါင်းစားနေလား ယောင်းတို့ရေ…
Posted on March 16, 2018 March 16, 2018 Author Khine